Getting More Help - Myanmar Wordpress
1 အင်တာနက်တွင် WordPress နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကူအညီများကို ရှာဖွေခြင်း၊
1.1 အရေးကြီးစကားလုံး(Keyword) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရှာဖွေခြင်း၊
1.2 ရှာဖွေရေးအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှာဖွေခြင်း၊
1.3 ရှာဖွေရေးဝပ်ဆိုဒ်များဖြင့် ရှာဖွေခြင်း၊
1.3.1 Google, Yahoo နှင့် Bing ကဲ့သို့ ဝပ်ဆိုဒ်တွင်ရှာဖွေခြင်း၊
1.4 အရေးကြီးစကားလုံးကို စူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက် ကြေငြာအမှတ်အသားများကို အသုံးပြုပါ။
2 WordPress ၏ အကူအညီပေးရေးနေရာ
3 အကျိုးရှိမည့် အခြားသောအချက်အလက်ပေးရေးနေရာ
WordPress နှင့်ပက်သတ်သည့်အကူအညီကို ရှာရန်မှာ မခက်ခဲပေ။ WordPress အသုံးပြုသူများကို ကူညီမည့် အခြားဝပ်ဆိုဒ် များရှိပါသည်။ Codex နှင့် အမေးအဖြေစာမျက်နှာတို့သည် အကျိုးရှိပါသည်။ သို့သော် ထိုအကြောင်းအရာများစွာမှ မည်သည့်နေရာမှအကူအညီများကို စတင်ကြည့်ရှုသင့်သည်ကို သင်ဘယ်လိုသိရမည်နည်း။
WordPress ၏ အမေးများသောမေးခွန်းများတွင် စတင်ရှာရန်ကောင်းပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကြုံရများသောမေးခွန်းများ နှင့်အဖြေများပါ ပေါင်းစည်းထားပါသည်။ ထို့နောက် သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်း အကူအညီရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ WordPress အမေးအဖြေစာမျက်နှာ တွင် လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်းပဲ WordPress အတွက် အကူအညီများကို ရှာဖွေရာတွင် အကောင်းဆုံးရှာဖွေရမည့်နေရာမှာ သင်ကြိုက်သည့် ရှာဖွေရေးနေရာ(သို့) ဝပ်ဆိုဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ သင်လိုချင်သောအချက်အလက်များကို လျင်မြန်စွာရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏အမေးအဖြေစာမျက်နှာပေါ်ရှိ ပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ပေးနေကြသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက် လည်း ဝန်ပေါ့စေပါသည်။
Codex ရှာဖွေရေးကူညီသည့်ပရိုဂရမ်အပို ကိုပါ ထပ်ပေါင်းခြင်းဖြင့် သင့်၏ရှာဖွေနိုင်မှုအရည်အချင်းကို တိုးမြှင့်နိုင်ပါသည်။ သင့်၏ WordPress စီမံခန့်ခွဲရေးအစီအစဉ်တွင် Codex ကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေမှုရလဒ်ကိုနှိပ်ပြီး ပေ့(ခ်ျ)ပွင့်လာမည်။ (သို့) အခြားထေ့(ပ်)တစ်ခုထပ်ပွင့်လာမည်။ ထို့ကြောင့် WordPress အပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း သင့်အား ထိုအကြောင်းအရာများကို ဖွင့်ကြည့်စေနိုင်ပါသည်။
အင်တာနက်တွင် WordPress နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကူအညီများကို ရှာဖွေခြင်း၊
အရေးကြီးစကားလုံး(Keyword) အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရှာဖွေခြင်း၊
The key words you need to help you solve the problem are hidden within this information. In particular, the error specifically references the files that are causing the issue: functions.php and wp-settings.php. The names of these files will make up part of your search. You could try opening the files directly to examine them. However, this may be of limited use, as the given line numbers may not correspond to the actual source of the error due to the way WordPress processes .php files. The specific errors are failed to open stream and failed opening required, with both happening inside the wp-settings.php file. This indicates that the problem is likely with wp-settings.php rather than functions.php. The fact that both errors contain the words "failed" and "open" is another clue.
Not all keywords can be found so easily. If the problem isaCSS or HTML issue, you can include the specific tag or selector that the problem seems to lie with. However, you should still look to include words in your search, as it can be difficult to know which tag is the real source of the issue. You may need to analyze the problem foraminute or two to in order to find the right terms. For example, if your web page layout differs between Microsoft Internet Explorer and another browser, then search for information on Internet Explorer layout bugs. If you havealayout error that remains consistent between browsers, on the other hand, identify the part of the layout that is affected. Is it the sidebar, header, post content, or comments? Likewise, if the header image is not showing up or not displaying correctly, begin by searching for wordpress header image and then add specifics such as wordpress header image missing to narrow things down.
Google, Yahoo နှင့် Bing ကဲ့သို့ ဝပ်ဆိုဒ်တွင်ရှာဖွေခြင်း၊
အရေးကြီးစကားလုံးကို စူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက် ကြေငြာအမှတ်အသားများကို အသုံးပြုပါ။
&quot;left margin&quot; OR &quot;nested list&quot;
WordPress ၏ အကူအညီပေးရေးနေရာ
Retrieved from "http://myanmarwp.com/index.php?title=Getting_More_Help&oldid=173"	Categories: WordPress HelpWordPress LessonsTroubleshooting	Navigation menu
This page was last modified on 15 August 2014, at 11:43.